လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု နှောက်ယှက်ခြင်း ဆိုတာကလည်း ပုံမှန်ဖြစ်လာနိုင်မယ့် ပုံစံသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကော အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား? - JustLogin
မတ် 7, 2021
အားလုံးအတွက် ခက်ခဲတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်လို့ ပြောရင်မမှားပါဘူး။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ နောက်ဆုံး ကြားချင်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းက နောက်ထပ် ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက် ကြိုပြင်ဆင်ထားသင့်တယ် ဆိုပြီးလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွမ်းကျင်သူ တွေရဲ့ အနှောက်အယှက်တွေကြောင့် ပြောင်းလဲလာမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်မှုကတော့ ဆက်ပြီး မြင့်တက်နေဦးမယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုထားတဲ့ အမြင်တွေကတော့ အတူတူပါပဲ။
HR ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေက ကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်ထားတာမျိုးတွေနဲ့လည်း အထိကသက်ရောက်မှု ရှိနေ ပြန်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နည်းစနစ်တွေကို ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် နည်းစနစ်တွေနဲ့ကို ဘယ်လို အချိုးကျ အောင် မိတ်ဆွေအနေနဲ့ စီမံဆောင်ရွက်မလဲ? ဒီလိုမျိုး နှောက်ယှက်မှုတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်ဖို့အတွက် မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ဘယ်လို ကြိုးစား တည်ဆောင်မလဲ?
အခုလတ်တစ်လော မျိုးဆက်သုံးဆက် နီးပါးလောက်ထိ ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ဆက်မယ့် ဘဝက ကိုယ့်မိဘတွေ ဖြတ်သန်းသလိုပဲ ဖြစ်မယ် ဆိုပြီး မျှော်လင့်ထားလို့ရပါသေးတယ်။ အခုလိုနှောက်ယှက်မှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆန်းသစ်မှုတွေကနေ ရာစုနှစ်တွေ အတွင်း ပထမဆုံးသော ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုကြီး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ငါးထောင့်ငါးရာလောက်က ကျွန်တော်တို့ လူသားမျိုးနွယ်တွေက မြင်းတွေကို ခရီးသွားလာတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုဖို့ လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုဆင့်ကဲလုပ်ဆောင်ချက်တွေကနေ ခရီးသွားနိုင်တဲ့ အကွာအဝေးတွေ၊ အစားအသောက် တွေ စိုက်ပျိုးပြင်ဆင်တာတွေနဲ့ စစ်ပွဲတွေမှာ ပြောင်းလဲလာမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုးတွေက ၁၄ ရာစုလောက်မှာ သံလိုက်အိမ်မြောင်ကို တီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားက ယဉ်ကျေးမှုတွေ သီးခြားဖြစ်တည် တည်ရှိနေရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို အဆုံးသတ် ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မှန်ဘီလူးတွေကိုလည်း ၁၆ ရာစုနဲ့ ၁၇ ရာစုလောက်မှာ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းတွေနဲ့ အဝေးကြည့် မှန်ပြောင်းတွေ အဖြစ် တီထွင်ဆန်းသစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုတိုးတက် ပြောင်းလဲလာမှုတွေကြောင့်ပဲ ကမ္ဘာကြီးကို သာမန် မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေ မြင်နိုင်အောင် လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၈ ရာစုကစပြီးတော့ နှောက်ယှက်ပြောင်းလဲလာမှုတွေ အရှိန်မြင့်လာတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ စက်မှုတော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွားတဲ့ ရာစုနှစ် တွေကိုတော့ စက်မှုတော်လှန်ရေးစီးရီး တစ်ခုအဖြစ် အားလုံးက သိထားကြပါတယ်။ ၁၈ ရာစုကာလက ရေနွေးငွေ့ အင်ဂျင်တွေ ပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်ကစပြီး တော်လှန်ရေးတွေ စတင်ခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကြီးမားတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အသုံးပြုတာတွေ ကိုလည်း ပါဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာတော့ ကွန်ပြူတာအသုံးပြုမှုတွေ ပေါ်ပေါက် လာခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ် ကြာပြီးတဲ့နောက် အရေးပါတဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေ ပြုလုပ်လာခဲ့ကြပြီးတော့ လူသား တွေရဲ့ နေမှုထိုင်မှု အလုပ်အကိုင်တွေအတွက် ကောင်းတာကော ဆိုးတာကော အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ လာခဲ့ပါတယ်။
၂၁ ရာစုအစပိုင်းမှာ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် စက်မှုတော်လှန်ရေးကို အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာမှတ်ဉာဏ်တု (AI) နဲ့ စက်ရုပ်နည်းပညာတို့ကြောင် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ချက်အစစ်အမှန်တွေနဲ့ Cloud Computing နည်းပညာတွေ တိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီလိုလုပ်ငန်းနှောက်ယှက်ပြောင်းလဲလာမှုတွေကို လပိုင်းအတွင်း ဖြေရှင်းနိုင်ကြ ပြီးတော့ တစ်ချိုု့ကိစ္စတွေကို ရက်ပိုင်းအတွက်မှာတောင် ပြေလည်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်ကာလရဲ့ ဂန္ဓဝင်မြောက်တဲ့ စက်မှုတော်လှန်ရေးတွေကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင် –
Uber and Airbnb ကတော့ တက္ကစီနဲ့ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို သေချာလေး နှောက်ယှက် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အက်ပ်လီကေးရှင်းတွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ အချက်အလက်မျှဝေအသုံးပြုတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခု အဖြစ် လမ်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ချက်တွေက သန်းပေါင်းများစွာသော လူတွေကို သူတို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ အောက်ကနေပဲ ဝင်ငွေတွေရရှိနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ် ကူးစက် ရောဂါကြီးက ဒီကုမ္ပဏီ နှစ်ခုလုံးကို အကျပ်ရိုက်စေတယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့ရဲ့သမားရိုးကျ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ သက်ရောက်မှုက အနည်းငယ်ပဲရှိတာပါ။ လုပ်ငန်းတွေကို သူတို့ပိုင်ဆိုင်ကြတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ ပြုပြင် စရိတ်တွေကို လျှော့ချလိုက်ရုံလေးပါပဲ။
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ Alibaba အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ တစ်ရက်တာ (11/11) ဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးတစ်ခုတည်းမှာတင် သူ့ရဲ့ ဖြစ်ပေါ်နေကျ ကုန်သွယ်မှုမှတ်တမ်း ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းတွေကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲပါတယ်။ သူတို့က တရုတ်လူမျိုး သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ဈေးဝယ်ယူမှု တွေကို သူတို့ရဲ့ အနောက်တိုင်းရှေ့ဆောင်လမ်းပြတွေ ဖြစ်တဲ့ Amazon နဲ့ eBay တို့လို လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပုံစံတွေကို ပြောင်းလဲ ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ အနောက်တိုင်းက ပစ္စည်းရောင်းချမှုတွေ လိုပဲ သူတို့လည်ပတ်နေနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး “တစ်ရက်တာ ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကလဲ နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်တွေကို ဝယ်ယူခွင့် ရတဲ့အတွက် လျှော့ဈေးနဲ့ ဈေးချပေးတာထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တွေတင် မကပါဘူး ဖက်ရှင်တံဆိပ်အသစ်တွေကိုလည်းဒီပလက်ဖောင်းပေါ်မှာအရှိန်အဟုတ်နဲ့ဒီလိုမျိုးကိုဗစ်ကာလမှာတောင်တိုးတက် လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Zoom အနေနဲ့လည်း သုံးလအတွင်း နေ့စဉ်အသုံးပြုသူအရေအတွက် (၁၀) မီလီယံကနေ (၂၀၀) မီလီယံအထိ မြင့်တက် လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီ အက်ပ်လီကေးရှင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကို တော်လှန်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီးတော့ ချီးကျူးထောပနာ ပြုမှုတွေ ကိုလည်း ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Zoom ဆိုတဲ့စကားလုံးက Verb တစ်ခုဖြစ်လာရုံတင်မကပါဘူး နေရာရွေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်ရမှု မြင့်မား လာတာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အသိုက်အဝန်းအသေးတစ်တွေကို ခေါ်ဝေါ်တဲ့ Zoom Town ဆိုပြီး တော့လည်း ဝေါဟာရတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ ရပါတယ်။
ဒီကိစ္စရပ်တွေအားလုံးက နည်းပညာကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး
အပေါ်မှာပြောကြားခဲ့တာတွေက နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်တွေ ဆိုတာကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် နည်းပညာတွေနဲ့တင် တော်တော်လေးကို ပြောင်းလဲမှုကြီးတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီနည်းပညာတွေကို ထိထိ ရောက်ရောက် အသုံးပြုလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ တစ်ချို့အရာတွေ အတွက် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားစေနိုင်တာတွေ ရှိတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။
Uber နဲ့ Airbnb ကတော့ သာမန်မဟုတ်တဲ့ တက္ကစီမောင်းတဲ့သူနဲ့ တည်းခိုတဲ့နေရာရှာဖွေတဲ့ သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးဖို့အတွက် ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ ဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ချန်လှပ် ထားတာမျိုးတွေတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ သူတို့တုန့်ပြန်ခဲ့တာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ အချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ တစ်ကြိမ် တစ်ခါပဲ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အလုပ်မျိုးလုပ်ရတာကိုတော့ သူတို့အနေနဲ့ သဘောကျကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Alibaba ရဲ့ အောင်မြင်မှုက တရုတ်နိုင်ငံမှာ တရားဝင်လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုအဖြစ်တောင် မြင့်တက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် က ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ သလိုပဲ 4IR ဆိုတာကတော့ နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတွေအပြင် ကျင့်ဝတ်နဲ့ လက္ခဏာအမှတ်အသား၊ အေဂျင်စီနဲ့ ယုံကြည်ရလောက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ပြဿနာမျိုးတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
နောက်ပြီး ခုလိုရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှာ ကာလအတွင်းမှာလည်း Zoom လိုမျိုး တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ ရွေးချယ်စရာ အမှတ်တံဆိပ် တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ Zoom ရဲ့ CEO တစ်ယောက်အနေနဲ့ 1 star အဆင့် ဝေဖန်ချက်တွေကို ကိုယ်တိုင် ဖတ်တာမျိုးက Zoom ရဲ့ အောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လမ်းနိုင်တဲ့ အဖြေတစ်ခုများ ဖြစ်နေမလား ဆိုတာ စဉ်းစား စရာပါ။
နှောက်ယှက်မှုများကို အဆင်သင့်ရင်ဆိုင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ့် အဖွဲ့တစ်ခု တစ်ဆောက်ခြင်း
သုံးစွဲသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ အပြုအမူတွေကို သတိထားသိမိခြင်းနဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေက Startup လုပ်ငန်းတွေမှာ ဘာကြောင့် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေတာလဲ။ သီအိုရီတစ်ခုအရဆိုရင်တော့ လုပ်သက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်း လည်ပတ်ပုံနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်စွမ်းရှိတာတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြုလုပ်ထားတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တွေကို မေးခွန်းတွေထုတ်ပြီး ကန့်ကွက်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ အမြင်မရှိဘူး ညံ့ဖျင်းတယ်လို့ မှတ်ယူ လို့ရပါတယ်။
စီမံခန့်ခွဲရေး တိုင်ပင်ညှိနိုင်းနိုင်တဲ့ Accenture ရဲ့ပြောကြားချက်အရ Startup ကုမ္ပဏီလေးတွေအနေနဲ့ သေသေချာချာ ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ ခက်ခဲ တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ဖောက်သည်တွေကို “လုပ်ငန်းအတွင်းပိုင်း လုပ်ဆောင်ချက် တွေကနေ ပြောင်းလဲဖို့” အကြံပေးကြပါတယ်။ အကြံပြုချက်တွေမှာတော့ “ဆန်းသစ်တီထွင်ရေးလေ့လာခန်း” ဒါမှမဟုတ် “ဒီဂျစ်တယ်စက်ရုံ” တွေကို အာရုံစိုက်ပြီးတော့ ဖန်တီးစေချင်တဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
HR ကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် ဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်ခန့်အပ်ဖို့အတွက် ပုံစံနှစ်မျိုးကွဲပြားသွားမယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်သူတွေကို ရေရှည်အတွက်ကိုပါ မျှော်မှန်းပြီးတော့ အာရုံစိုက် စေချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဒီဝန်ထမ်းတွေဟာ အဓိကကျတဲ့ လက်ရှိဖြစ်စဉ်တွေ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို စိတ်အားထက်သန်မှု ရှိရှိနဲ့ ထိရောက်မှု ရှိပြီးတော့ တိုးချဲ့နိုင်ဖို့ ကို အဓိကထားကြပါတယ်။
HR စနစ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် သက်ရောက်မှုများ
ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် HR တွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ ဆန်းသစ်မှုနဲ့ ပက်သက်လာရင် ဦးဆောင်သူတွေ ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါ ကာလမှာတော့ ရှေးဟောင်းစာရွက်စာတမ်း အသုံးပြုမှုတွေနဲ့ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ မရရှိနိုင်တဲ့ စနစ်တွေရဲ့ အားနည်းချက်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Stay-at-home စနစ်နဲ့ အမြန်ဆုံး အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ အရင်ကတည်းက Cloud စနစ်ကို အသုံးပြုနေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
JustLogin လိုမျိုး Cloud-based HR စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်တွေနဲ့သာ ပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ရုံးတက် ရုံးဆင်းချိန်နဲ့ ရုံးတက်တဲ့ ရက်တွေကို အဝေးကနေ ထိန်းချုပ်ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးပျက်ဖို့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်းလို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုလည်း တောင်ဆိုမှုကနေ ခွင့်ပြုပေးတဲ့ အဆင့်အထိ အွန်လိုင်းကနေ အခက်အခဲမရှိ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကူးစက်ရောဂါကာလ ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ ငွေပေးချေစရာတွေ များရင်များနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ပိုင်း ဝန်ထမ်းဈေးကွက်ကလည်း အဆင်ပြေပြီးတော့အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ စုဆောင်းလိုတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ အတွက် ကတော့ စဉ်းစားစရာအချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ကနေ ရုံးခန်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိတဲ့ အခါမျိုးမှာတော့ လုပ်ငန်းခွင် အသစ်နဲ့ အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံ အဟောင်း တွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အဟောင်း ပေါင်းစပ်မှုတွေ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပူချိန်နဲ့ နှာခေါင်းစည်း စစ်ဆေးတာတွေကို လူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲ Check-in ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အားလုံးအတွက် အသစ်တွေ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုတာ စိတ်ခံစားချက်အဆင့် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အနေနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိပြီးတော့ ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း ရှိရပါမယ်။ ယုံယုံကြည်ကြည် ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ငှားရမ်းခြင်းတွေက ပြောင်းလဲနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို လက်ခံလာနိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Cloud-based HR Software တစ်ခုဖြစ်တဲ့JustLogin ကိုအခုပဲစတင်အသုံးပြုလိုက်ပါ။
JustLogin ဆိုတာကတော့ အသေးစားနဲ့ အလတ်စားလုပ်ငန်းတွေရဲ့ လစာ၊ ပျက်ကွက်ရက်၊ ရုံးတက်ရက်၊ ကုန်ကျစရိတ် တွေ နဲ့ အခြားစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကို အလိုအလျောက် တွက်ချက်ပေးနိုင်တဲ့ Cloud-based HR Application တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးမှာပဲအလုပ်လုပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုမှာ လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရောင်းဆိုင် တစ်ဆိုင် ဖြစ်ဖြစ်၊ ဂိုဒေါင်တစ်ခုမှာ ဒါမှမဟုတ် အိမ်ကအလုပ်လုပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာ သောလုပ်ငန်းတွေရဲ့ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်ကိုင်ပုံတွေ အများကြီးတိုးတက်လာဖို့အတွက် ကူညီခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ justlogin.com/free-trial ကနေအခုပဲဝင်ပြီးတော့ JustLogin ကို စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ။
Uncategorized @my နိုဝင်ဘာ 24, 2020
ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် လုပ်အားပိုင်း ဆိုင်ရာ တိုးတက် ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်များ
Uncategorized @my ဇန်နဝါရီ 28, 2021
ဒီဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ဝန်ထမ်းများအတွက် စစ်ဆေးမှုများ